MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE LOUISIANA CATAHOULA LEOPARD DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee Louisiana Catahoula Leopard Dog
Bush the Louisiana Catahoula Leopard Dog, saaxiibka faraska fuushan
Liistada eeyaha loo yaqaan 'Catahoula Leopard Mix Breed Dogs'
Catahoula Hog Eyga
loo-ee-zee-an-uh bisad-a-hou-la lep-erd dawg
Koodhka gaaban, hal koodh ayaa midabkiisu yahay mid meeris ah ama qaab madow / midab. Dharka qaarkood khafiif ayey noqon karaan, laakiin badidoodu waa gaaban yihiin oo adag yihiin. Midabku waa muuqaal si gaar ah caan ugu ah xoolahan: midabka indhaha iyo midabka jaakadku waxay u shaqeeyaan si aad u dhameystiran oo muujinaysa. Qalfoofku waa ballaadhan yahay oo fidsan yahay. Lugaha waa lafdhabar adag oo xoog badan. Laabta qoto dheer waxay siisaa awood wanaagsan oo wadnaha iyo sambabada ah.
Eeyaha loo yaqaan 'Louisiana Catahoula Leopard Dog' waa mid madaxbannaan, ilaalin iyo xuduudeedba leh. Jacaylka qoyskiisa iyo dhammaan dadka ay si fiican u garaneyso laakiin waxaa lagu sii hayn karaa shisheeyaha (tan waxaa ku jiri kara carruur qalaad). Bulsho sifiican, doorbiday da'da yar. Waxay u baahan yihiin in loo oggolaado inay soo baxaan oo ay uriyaan qof. Waxay qaan gaadhaan ilaa 2 sano jir. Jacaylka sayidkiisa. Kataloolka laguma taliyo milkiile aan si dhab ah u qaadan arrinta hogaamiyaha xirmada. Milkiilaha saxda ah ee fahamsan muhiimadda dhismaha, hoggaanka , iyo jimicsi Catahoula waxay sameyn kartaa xayawaan la yaab leh. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo xirmadooda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Sababtoo ah eeygu wuxuu u gudbiyaa xanaaqiisa ciil iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY ka sarreeyaan nidaamka eyga. Bini'aadamku waa inuu noqdaa kuwa go'aaminaya, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee xiriirka aad la leedahay eygaagu u noqon karto guul dhammaystiran. Noocani wuxuu u baahan yahay a milkiilaha xukuma kaasoo muujinaya hogaan adag.
Miisaanka: 55 - 80 rodol (16 - 37 kg)
Dhererka: Ragga 22 - 26 inji (56 - 58 cm) Dumarka 20 - 24 inji (51 - 61 cm) Miisaanka eyga waa inuu ahaadaa mid isku dheelitiraya dhererka.
U nuglaanshaha dysplasia iyo dhego beel. Dhego beelid (labada dhegood ama mid keliya) tarankaani wuxuu yeelan karaa dhibaatooyin xagga indhaha ah (aragtida tunnelka, isha ma wada furi doonto, ardaygu waa caadi, iwm). Isir ahaan waxay xor ka yihiin cuduro badan. Qaar ka mid ah eeyaha waaweyn ayaa la og yahay inay heleen kansarka .
Qaarkood waxay ku fiican yihiin guryaha dhexdooda halka kuwa kalena aysan ku fiicnayn. Waxay kuxirantahay dhamaan xariiqa eyga iyo inta jeer ee mulkiiluhu la qaato eeyga iyo inta jimicsi ee uu helo. Catahoulas waxay ubaahantahay fiiro gaar ah. Tani ma aha eey lagu xidhi karo guri eey, quudin karo oo la iska indho tiri karo. Chaining iyo / ama iska indhatirida Catahoula waxay ka dhigi doontaa xishood ama dagaal. Waxay u baahan yihiin wehel bani-aadam. Tani macnaheedu maaha inay u baahan yihiin inay ku noolaadaan jeebkaaga lagumana hayn karo banaanka noocyadan waxay ubaahan yihiin jihayn, tababar, wax ay qabtaan, dadka, feejignaanta, iwm. , doorbidayaa mid leh albaab laga soo galo ka dibna loo rogo guryaha jiifka. Habkaas ayaa looga ilaaliyaa canaasiirta. Waxay u baahan yihiin in lagu hayo gudaha cimilada qabow runtii, maadaama ay yihiin eey hal dahaaran.
schipperke pomeranian mix puppy ee iib ah
Markaad ugaarsanaynin, noocani wuxuu u baahan yahay in lagu qaado a socod maalinle ah , orod, socod ama socod. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku raaxeysan doonaan inay si xor ah uga dhex ordaan daarad deyr leh ama meel furan oo nabdoon. Marka Catahoulas ay ciyaaraan waxay noqon karaan kuwo buuq badan iyo muuqaal ahaanba. Dadku waxay u baahan yihiin inay taxaddaraan oo ey bartaan eyga inuu xakameeyo ciyaarta. Markaad ku ciyaareyso noocyadan, qofku wuxuu u baahan yahay inuu ka taxaddaro inaysan waxyeello u geysan eeyga ku soo ordaya iyaga, oo ku boodaya oo ku garaacaya iyaga. Waxay ubaahan yihiin jimicsi waxayna bilaabi doonaan inay dhibaato kala kulmaan calalinta, qodida, ciinka, iwm hadii aysan helin. Laakiin, iyagu ma ahan eey heer sare ah, sida lagu arkay Kulliyadaha Xuduudaha , Jack Russell Terriers , Daroogada Fox , Aussies , iyo qaar ka mid ah ugaarsiga ugaarsiga sida Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka . Waxay ku raaxaystaan ​​kaqeybgalka dhaqdhaqaaqa.
Maaddaama ay Catahoula tahay eey gaaban oo hal-daboolan, baahiyaha is-qurxinta ayaa ugu yar. Waa inay qubaystaan ​​dhowr jeer sanadkii (illaa ay wax galaan oo wasakh yeeshaan mooyee) iyo cadayasho wanaagsan usbuucii hal jeer. Ciddiyaha waa in si joogto ah loo jarjaraa oo ilkaha la nadiifiyaa. Noocani waa celcelis ilaa iftiin daadinta joogtada ah. Markaad dareento walwal ama walaac, waxay u janjeeraan inay wax badan daadiyaan, gaar ahaan markaad salaaxayso.
Eyga loo yaqaan 'Louisiana Catahoula Leopard Dog' ayaa la rumeysan yahay inuu asal ahaan ka soo jeedo Nordic Wolfhound oo la soo bandhigi doono ilaa seddex ilaa shan boqol oo sano ka hor inta uusan Isbaanishku imaan, si kastaba ha noqotee, cidina runti ma ogaan doonto hubaal. Gobolka Louisiana waxaa loo daliishaday inuu yahay barta asal ahaan, gaar ahaan aagga Catahoula. Sannadkii 1979-kii, ayaa loo aqoonsaday eyga gobolka ee Louisiana. Catahoula waxaa loogu magac daray kaniisad ku taal waqooyiga-bari ee Louisiana iyo ka dib dhibco isku dhafan oo ku yaal jaakadiisa. Waqtigaan noocan ah waxaa loo isticmaali jiray in lagu soo ururiyo doofaarrada lo'da iyo lo'da - xoolihii baxsaday, waxayna ku noolaayeen keymaha iyo jiqda. Waxay ku lug lahayd dadaal kooxeed oo si heer sare ah isugu dubaridan una abaabulan, xawaare ku socda, qatar iyo mucjiso daawasho leh. Kooxda eyda ku habboon badanaa badiyaa waa seddex, waana inay wada shaqeeyaan. Haddii kale, hal doofaar ayaa seddexdaba ku dili kara daqiiqado gudahood. Ey kasta waa inuu ka feejignaadaa waxa doofaarka iyo labada eey ee kale sameynayaan oo ay uga falceliyaan si waafaqsan. Ugaadhsadayaashu mararka qaarkood waxay adeegsadaan Catahoula si ay u daba galaan oo geed rakoons , laakiin tarankaani wuxuu ku badan yahay guriga isagoo ku shaqeynaya tuugada leh doomaha adag. Eygan waxaa si gaar ah loogu adeegsadaa hawsha adag ee wadista iyo soo koobida doofaarka iyo lo'da aan amar ku taaglayn.
cagajuglaynta american iyo kala duwanaanshaha pitbull
NALC = Ururka Qaranka ee Louisiana Catahoula
SKC = Naadiyada Keena ee Mareykanka (oo ku yaal MS)
Sidoo kale tiro kale oo naadir ah oo naadi ah ayaa muujineysa. Kanada gudaheeda sidoo kale waxaa laga aqoonsan yahay Naadiga Cunnada Naasiga ah
Kani waa Flip eegga indhaha buluugga ah ee loo yaqaan 'Catahoula Leopard Dog – Sawir waxaa iska leh Shadyspot Catahoulas
Sadie, Louisiana Catahoula Leopard ey
Buster ee Louisiana Catahoula Leopard Dog at 2 sano jir ah— 'Buster wuxuu leeyahay mid isha buluug ah iyo hal il oo bunni ah. '
Buluugga Louisiana Catahoula Leopard Dog— Wuxuu ku saabsan yahay eeyga ugu macaan uguna jecel waa wiil hooyo ah. '
Kani waa Easy Joseph, oo lagu naanayso Elmo.
Dixie the Doyga Catahoula Leopard ee jira 10 bilood
Whiskey yar yar ee Catahoula markay jiraan 6 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo ah Louisiana Catahoula Leopard Dog
Louisiana Catahoula Leopard Eyga 2
shiish timaada shiinaha vs shih tzu
i tus sawir mastiff ah
Cocker rottweiler qas spaniel muqisho
xoolo dhaqatada australia poodle mix mini
bulldog faransiis madow iyo caddaan
casaan heeler iyo qas qas